शुक्रबार रिलिज दुई फिल्म 'क्याप्टेन' र 'ब्रेकअप' , कसले मार्ला त बाजी ? – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsKollywoodशुक्रबार रिलिज दुई फिल्म ‘क्याप्टेन’ र ‘ब्रेकअप’ , कसले मार्ला त बाजी ?
शुक्रबार रिलिज दुई फिल्म ‘क्याप्टेन’ र ‘ब्रेकअप’ , कसले मार्ला त बाजी ?
March 1, 2019 Tulasa Karki Kollywood, News 0
बलिउड होस् या कलिउड यहाँ फिल्म रिलिज हुने दिन प्राय शुक्रबार हुने गर्द्छ । नेपाली फिल्म क्षेत्रमा पनि हरेक शुक्रबार फिल्म रिलिज हुने गर्छन् । फाल्गुन १७ अर्थात आजशुक्रबरबाट देशका विभिन्न हलहरुमा एकसाथ दुई फिल्म प्रर्द्शनमा आएका छन । प्रर्द्शनमा आएका ती दुई फिल्मको नाम हो ‘क्याप्टेन’ र ‘ब्रेकअप’ ।
एक साथ दुई फिल्म प्रर्द्शनमा आउनु अहिले समान्य भएता पनि कुन फिल्मले राम्रो ब्यापार गर्ने हो, कसको पल्लु भरी हुने हो त भन्ने प्रश्न भने सधैंनै आउने गर्द्छ ।
निर्देशक दिवाकर भट्टराईको निर्देशनमा निर्माण भएको फिल्म नायक भुवन केसीले निर्माण गरेका हुन् । फिल्ममा एउटा सानो गाउँबाट राष्ट्रिय फुटबलको विजेतासम्म बन्न सफल एक युवकको संघर्षको कथालाई फिल्ममा समावेश गरिएको छ ।
फिल्ममा अनमोलसँगै अभिनेता सरोज खनाल तथा प्रशान्त ताम्राका, उपासना सिंह ठकुरी र प्रियंका एमभी लगाएतका कलाकारहरुको मुख्य अभिनय रहेको छ ।
प्रेम,विछोड तथा प्रेम प्रतिको युवायुवतीको सोच आधारित रहेर निर्माण भएको फिल्म हो ‘ब्रेकअप’ ।
हेमराज बिसी निर्देशित फिल्ममा रुपक थापा, दीपक खतिवडा, रेनु राणा र हेमराज बिसी लगानी रहेको फिल्मलाई नरेन्द्र मैनालीले खिचेका हुन भने सुरेन्द्र पौडेलले सम्पादन गरेका छन् । फिल्ममा आशिर र शिल्पासँगै इच्छा कार्की, रेमनदास श्रेष्ठ, सरोज खनाल लगाएतका कलाकारहरुको मुख्य अभिनय रहेको छ
‘ब्रेकअप’को प्रिमियर शो सम्पन्न
‘चट्ट रुमाल’को रिमिक सलीमानको यात्रामा